संखुवासभा ह’त्याकाण्ड : के गर्दैछ प्रह’री ? यस्तो छ जी’वित रहेका ९० वर्षीय वृद्धको बयान : – Sadhaiko Khabar
संखुवासभा ह’त्याकाण्ड : के गर्दैछ प्रह’री ? यस्तो छ जी’वित रहेका ९० वर्षीय वृद्धको बयान :
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २१, २०७८ समय: १५:५७:१३
संखुवासभा / संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनाको ह’त्या भएको घट’नामा जी’वित रहेका ९० वर्षीय वृद्धले घट’नाबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन् । ९० वर्षीय वृद्ध बौद्धमान कार्कीले घ’टनाबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका हुन् ।
बौद्धमानलाई उदृत गर्दै घट’नास्थल मादी नगरपालिका–१ उमलिङका वडाध्यक्ष खेमनाथ कटुवालले भने, ‘अहिले म घट’नास्थलमै छु । घ’टनाबारेमा सोही परिवारका जी’वित सदस्य ९० वर्षीय बौद्धमानसँग बुझ्दा उहाँले कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ।’
वडाध्यक्ष कार्कीका अनुसार बौद्धमानले आफू ६ बजे नै खाना खाएर सु’तेको र घट’नाबारे केही थाहा नभएको बताए । बिहान मात्रै घट’नाबारे अरुले भनेपछि जानकारी पाएको उनको भनाइ छ । बौद्धमान राम्रोसँग का’न पनि सुन्न स’क्दैनन् भने आँ’खासमेत राम्रोसँग देख्दै’नन् ।
ल’खेटी–लखे’टी ह’त्या गरिएको आ’शंका
सोमबार बाटो हिँड्ने स्थानीयले बाटोमा श’व देखेपछि यस ह’त्याकाण्डबारे प्र’हरीसम्म जानकारी पुगेको थियो । त्यसपछि २ घण्टा टाढा रहेको मादी प्र’हरी चौकीबाट प्रहरी हवल्दारको क’माण्डमा ३ जनाको टोली घट’नास्थल पुगेको थियो । उनीहरुले घट’नास्थललाई सुरक्षित गरेका थिए ।
अहिले भने खाँदबारीबाट डिएसपी लालध्वज सुवेदीसहितको टोली घ’टनास्थल पुगेकीसकेको छ । उनका अनुसार एउटा श’व बाटोमा भेटिएको छ । एउटा श’व घरभत्रि रहेको छ । दुई वटा श’व बारीको कान्लामा छन् भने बाँकी २ वटा श’व खो’ल्सामा छन् ।
विभिन्न ठाउँमा श’वहरु छ’रिएको पाइएपछि ल’खेटी–लखे’टी ह’त्या भएको हुनसक्ने प्रह’रीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। ‘श’वहरु एकै ठाउँमा छैनन् । छ’रपस्ट अवस्थामा रहेकाले ल’खेटी–लखे’टी ह’त्या भएको हुनसक्ने हामीले आ’शंका गरेका छौं’ डिएसपी सुवेदीले भने ।
उक्त घ’टनामा मादी नगरपालिका–१ खोला गाउँका ५८ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीको परिवारका ६ जना’को ह’त्या भएको छ।
मृत अबस्थामा फेला पर्नेहरुमा ८४ वर्षी’या पार्वती कार्की, ५२ वर्षी’य तेज बहादुर कार्की, ५२ वर्षी’या कमला कार्की, ३२ वर्षी’या रञ्जना कार्की, ११ वर्षी’य दिपेन कार्की र ७ वर्षी’या गोमा कार्की रहेकी प्रदेश न. १ का डिआइजी अरुणकुमार बिसीले जानकारी दिए ।
रञ्जनाका श्रीमान् भने विदेशमा रहेको पाइएको छ ।
६ जनाको ह’त्या भएको खबर सोमबार बिहान साढे ९ बजेतिर प्र’हरी चौ’की मादीमा आएको थियो । स्थानीयले ६ जनाको ह’त्या भएको खबर गरेपछि प्र’हरी चौ’की मादीका कार्यरत हव’ल्दारसहित ३ जना प्र’हरी तत्का’लै घट’नास्थल पुगेका थिए ।
फरे’न्सिक विज्ञ र कु’कुरसहितको टोली घ’टनास्थलतर्फ :
एकै परि’वारका ६ ज’नाको ह’त्या भएको भन्ने जानकारी आएपछि घट’नालाई ग’म्भीर रुपमा लिँदै फरे’न्सिक विज्ञ र कु’कुरसहितको टो’ली परि’चालन गरिएको डिआइजी बिसीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार संघीय प्र’हरी इकाई कार्यालयबाट तालिम प्राप्त कु’कुरसहिको टो’ली घ’टनास्थल पठाइएको छ ।
त्यसैगरी फरे’न्सिक वि’ज्ञसहितको टो’ली पनि पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘जतिसक्दो घ’टनास्थललाई सु’रक्षित राख्न भनिसकेका छौं’ डिआइजी बिसीले भने, ‘तालिम प्राप्त कु’कुर र फरे’न्सिक वि’ज्ञको टो’ली घट’नास्थल पुगेपछि अनुस’न्धानमा सहज हुनेछ।’- नारायण अधिकारी / नेपाल ला’ईभबाट, त’स्वीर :- फा’ईल ।